Hay ada Oxfam oo sheegtay sara u kac xoogan in uu soo wejihi doono qiimaha cuntada aduunka sanada 2030.
Hay ada Oxfam International ayaa ka digtay sara u kac xoogan oo soo wajaha qiimaha cuntada aduunka,iyadoona baaritaan ay samaysay ay ku sheegtay in sanada 2030 uu noqon doono wakhtida sida rasmiga ah loo dareemo sara u kacaasi.
Oxfam waxaa ay sheegtay in mudo 20 sano gudaheeda uu sara u kac ku imaandoon cuntooyinka daruuriga ah,iyadoona sida ay xustay hadii aanay talaabo qaadin madaxda caalamka ay suura gal tahay in si dhakhsa ah loo dareemo sara u kaca.
Oxfam waxaa ay ku sheegtay sababaha ku keenaya cuntada sara u kaca in ay kamid tahay isbadalka cimilada,waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in la qaado talaabo looga hortagaya dhibaatooyinka ka imaanaya isbadalka cimilada.
Madaxa fulinta ee hay ada Oxfam Barbara Stocking waxaa uu ka digay in dhagaha laga furaysto dhawaqooda,iyadoona sara u kaca ay hayadu ka dhawaajisay xiligan laga dareemi karo suuqyada caalamka.
Waxaa sii kordhaya baahida biyaha iyo dhulka,iyadoona cimiladu ay tahay tan ugu weyn ee ka qayb qaadanaysa in uu yaraado dalaga kaso go aya beeraha.
Saraakiil sare oo ka tirsanaa Maamulka Korneel qadaafi,kana tanaasulay xilkoodii oo baaq u diray Ciidamada Dowlada Liibiya.
Saraakiil sare oo ka tirsanaa Maamulka Korneel qadaafi,kana tanaasulay xilkoodii ayaa baaq u diray Ciidamada Dowlada Liibiya si ay ugu biiraan kacdoonka looga horjeeda Nidaamka kaligii taliska ah ee dalka Liibiya.
Saraakiisha ka tanaasulay xilkoodii oo ilaa Sideed gaaraya ayaa intooda badan waxaa ay ku cambaareeyeen Nidaamka Qadaafi in uu yahay mid gumaadaya shacabka,loona baahan yahay in laga hortago.
Saraakiishan oo intooda badan ah Generalo ciidan ayaa waxaa ay ku talinayaan in la kordhiyo tababarka la siinayo Ciidamada kacdoonka,iyadoona xiligan uu yahay wakhtigii ay ugu daciifsanaayeen Ciidamada Qadaafi.
Saraakiishan oo shir jaraa id ku qabtay Magaalada Roma ee xarunta dalka Talyaaniga ayaa sheegay in awoodii dhinaca Ciidanka iyo hubka ee Qadaafi ay la ciifiyeen Duqaynada Nato,ayna suura gal tahay in lasoo afjaro hadii ay howl galadaasi socdaa.
Hadalka Saraakiishan ayaa yimi xili madaxweynaha Liibiya Korneel Qadaafi uu kusoo dhoweeyay qasrigiisa Magaalada Triboli madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma,waxaana ay ka wada hadleen sidii xal diblomaasiyadeed loogu dhamayn lahaa dhibaatada sii baahaysa ee gudaha Liibiya ka jirta.
Germany oo ka takhalusaysa qayb kamid ah xarumaha tamarta ee dalkaasi,kadib dhibaatadii Fukushima kasoo gaarray dhul gariirkii ka dhacay Japan.
Dowlada Germany ayaa ka takhalusaysa qayb kamid ah xarumaha tamarta ee dalkeeda,kadib dhibaatadii Fukushima kasoo gaarray dhul gariirkii ka dhacay Japan ee waxyeelada weyn u gaystay sharkadaasi Nuclear-ka.
Raysal Wasaaraha Germany Angela Merkal ayaa soo dhoweysay in si tartiib tartiib ah ay Dowladoodu uga takhalusto xarumaha tamarta ee laga cabsi qabo in ay dhibaato gaarto,marka ay masiibo dabiici ah ay timaado.
Angela Merkal waxaa ay sheegtay in ay daba socoto talaabadan mid kale oo iyadana dib u habayn loogu samaynayo xarumaha Nuclear-ka ee dalkaasi Germany.
Germany ayaa kamid ah wadamada ugu waaweyn ee isticmaala korontada laga dhaliyo Nuclear-ka,iyadoona shirkado badan oo wax soo saar oo dalkaasi ku yaala ay yihiin kuwo ku shaqeeya tamarta laga dhaliyo Nuclearka.
Ganacsi ahaan Gemany waa mid u baahan in ay sii kordhiso xarumaheeda Tamarta,laakiinse sida ay aamin santahay Chancellor Angela Merkel waxaa ay arinta isbadal ku samaynta ay tahay mid yaran karta khatar Germany kasoo gaarta Nuclear-ka.
Isbadalada Germany ay ku samaynayso xarumaha tamarta ee dalkeeda ayaa ah mid looga hortagayo in ay Germany kasoo gaarto khasaarihii Japan kasoo gaaray waxyeeladii uu dhul gariirku u gaystay shirkada Nuclear-ka ee Fukushima.
Dowlada Liibiya oo lagu cambaareeyay Dilka Muwaadiin ku banaabaxayay qaar kamid ah Magaalooyinka dalka Liibiya.
Raysal Wasaaraha Dowlada Turkiga iyo madax kale ayaa si kulul u cambaareeyay Dhimashada rayid la sheegay in ay toogteen Ciidamada Amaanka ee dalka Syria.
Rajib Tayib Ordogan waxaa uu sheegay in ay tahay wax aad looga xumaado dhibaatadii shalay kasoo gaartay shacabka banaabaxa samaynayay,rasaasta ay fureen Ciidamada Amaanka Syria oo ay ahayd in ay iyagu ilaaliyaan Amaanka dadkooda.
Ordogan waxaa uu sheegay In ay tahay wadada kali ah ee u banaan Madaxweynaha Syria Bashaar Al asad in ay tahay in uu si degdeg ah ku qaado talaabo lagu badbaadinyo shacabka iyo weliba wadanka Syria.
Ordogan waxaa uu kadib dhacdadii maalintii shalay ay rayidka badan ku dhinteen uu sheegay in uu gudbiyay fariintiisii,loogana baahanyahay madaxweynaha Syria in uu isagu wax hagaajiyo,lana hadlo dadka kasoo horjeeda.
Afhayeen u hadlay hay ada xuquuqda aadanaha ee Qaramada midoobay oo lagu magacaabo Robert Colville ayaa waxaa uu dhinaciisa sheegay in lagula xisaabtami doono Dowlada Syria,dhibaatada ay u gaysanayso shacabka dalkaasi ee isbadal doonka ah.
Wadanka Syria ayaa kamid ah wadamada carabta ee ay banaabaxyada isbadal doonka ah ay ka socdaan,waxaana tan iyo intii ay bilowdeen banaabaxyada sida la sheegay ku dhintay in ka badan 1118 qof,iyadoona kumanaan kale ay dhaawacyo kasoo gaareen.